YUFA waxay leedahay in kabadan 300 xubnood, oo ay kujiraan xafiiska maareeyaha guud, xafiiska, waaxda maaliyada, waaxda sahayda, waaxda iibka, waaxda cilmi baarista iyo horumarinta, waaxda kormeerka tayada, waaxda teknolojiyada wax soosaarka, aqoon isweydaarsiga wax soosaarka iyo waaxyo kale. Waax kasta oo shirkadda ka mid ah waxay leedahay qayb shaqo oo cad, YUFA waxay u maamushaa shirkadda si waafaqsan xeerarka shirkadda. In kabadan 30 sano oo horumar ah, YUFA waxay uruurisay khibrad faro badan iyo hawlgal joogto ah oo leh fikrado ganacsi oo horumarsan, heerar maamul sare iyo faa iido wanaagsan
YUFA ayaa maray shahaadada nidaamka maaraynta tayada ISO9001-2015 iyo shahaadada nidaamka deegaanka ISO14001-2015. Maareynta nidaamsan waxay u keentaa waxtarka sare shirkadda iyo tayada adeegga macaamiisha.
Maaddaama ay tahay qaybta maamulka ee Ururka Refaan-celinta ee Henan, YUFA waxay xiriir iskaashi la sameysay Jaamacadda Henan ee Teknolojiyada iyo jaamacado kale oo badan, waxay abaabushay ardayda kulleejada inay u yimaadaan shirkadda tababarro sanad walba ah. Shaqaalaha shirkaddu hadda waxay u badan yihiin dhalinyaro waxayna leeyihiin aqoon xirfadeed qani ku ah, iyagoo sameynaya jawi wada shaqeyn iyo iskaashi.